Yini ongayibona eMadrid ngosuku olulodwa | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 28/12/2021 17:00 | Madrid, Yini ongayibona
Ungakwazi yini ukulazi idolobha ngosuku olulodwa? Akunjalo, noma okungenani awukwazi ukulazi ngokuphelele nokuthi idolobha lifanelwe kanjani ... kodwa kunezikhathi lapho ingekho enye indlela futhi kufanele wazi ukuthi ungasebenzisa kanjani lawo mahora.
Madrid ngosuku olulodwa... kanjani?
Madrid emahoreni angama-24
Ingabe wagcina eMadrid ngandlela thile futhi unosuku olulodwa kuphela lokwenza imizuliswano embalwa? Yini ongayazi ngesikhathi esifushane kangaka? Ungakuthola kanjani okuhle kakhulu kukho? Kulula, khetha kuphela ezikhangayo ezaziwa kakhulu.
Mhlawumbe ufika uvela phakathi nezwe, uvela ezweni elingumakhelwane noma ngaphesheya kwe-Atlantic, akunandaba, kodwa kufanele uthole Multi Card ukusebenzisa indlela ehamba ngaphansi njengendlela yokuthutha ngokushesha. Bala ukuthi ukuze uchithe amahora angu-24 enhlokodolobha yaseSpain uzodinga okungenani amathikithi amabili, uma ufika e-Barajas (eyodwa yangaphandle neyodwa emuva esikhumulweni sezindiza), kodwa kulokho kufanele wengeze umbhangqwana ukuze ufinyelele ezindaweni ezikhangayo zaseMadrid ngokushesha. .
Kunemigqa ye-metro eyi-12 eMadrid, ngaphezu kwebhasi, isitimela kanye nemigqa yethilamu, kodwa ukwenza kube lula i-metro ilula njengoba le ndlela yokuthutha ixhuma kahle kakhulu izindawo ezikhangayo kakhulu. Kusobala, uma ungakwazi njalo ukuhamba.
Isikhungo sedolobha yi- Puerta del SolNgakho-ke uma usesikhumulweni sezindiza ungasebenzisa inethiwekhi yemetro ebomvana, 8, ukuya eNuevos Ministerios. Ukusuka lapha thatha ulayini oluhlaza okwesibhakabhaka ubheke ePuerta del Sol bese wehla e-Tribunal. Ukusuka lapho ushintshela kulayini wasezulwini, u-1, futhi ekugcineni wehla kuSol lokho Kuyisiqalo esihle kakhulu ukuvakashela okungcono kakhulu kweMadrid ngosuku olulodwa. Sekukonke kuzoba uhambo lwehora lesigamu.
Okuhle kakhulu qala ngokuhamba ngesikhungo somlandoKuyisithombe esihle kakhulu sedolobha nomlando walo. Kwe I-Plaza Mayor, nsuku zonke, kukhona ngokuvamile abaqondisi abanezambulela ezimhlophe eziqoqa futhi ziqondise izivakashi, zombili ezikhuluma iSpanishi nesiNgisi.
Lezi zinhlobo zokuvakasha zihlala cishe amahora amathathu futhi cUzovakashela i-Plaza Mayor, i-Mercado de San Miguel, i-Gran Vía, i-Almudena Cathedral, i-Convent of the Carboneras Sisters kanye ne-Puerta del Sol.
Ungenza ukubhuka isikhathi esivumelana nawe noma ungavele uvele futhi ujoyine iqembu elakhiwayo. Ukuvakasha kwamahhala, kodwa iminikelo iyamukelwa futhi ilindelwe. Uma ufuna okwengeziwe kwalolu hlobo lohambo oluhlelekile, vele uye ejensi yezokuvakasha. Ungakwazi ngisho nokuqasha a Ukuvakasha kwe-Segway noma uhambo oluyimfihlo lomlando. Futhi uma ungathandi ukuba nabaqondisi futhi ufuna ukukhululeka ungahlala uzenzela eyakho indlela.
Bese ukhumbula ungaphuthelwa yiPrado Museum, Retiro Park, Neptune Fountain, Sainte Jerome Cathedral, lo IPlaza del Ángel kanye neCasa de Cisneros, ngaphezu kwalokhu engikubale ngenhla. Ngemephu yezokuvakasha enhle ngeke ube nenkinga. Futhi-ke, umzila ekugcineni uncike kulokho okuthandayo.
Isibonelo, Uyabuthanda ubuciko Ngemuva kwalokho I-Museo del Prado, Reina Sofía kanye ne-Thyssen-Bornemisza bazoba yebo noma yebo ohlwini lwakho. Bagxile kwezobuciko obuhle kakhulu lapha eMadrid, kodwa ngeke ube naso isikhathi sokuzibona zonke kanjalo bona ukuthi yimaphi amaqoqo othakasela kakhulu bese unquma. Abaningi bakhetha i-Reina Sofía ngoba nansi i-Guernica ka-Picasso ethandwayo, kodwa uma ufuna okuthile okujwayelekile, i-Prado Museum iyisinqumo esingcono kakhulu.
Ukuvakashela iminyuziyamu kukhipha amandla, kuyiqiniso, ngakho-ke uma ukhetha ukushiya ubuciko komunye umjikelezo futhi isimo sezulu simnandi, kungcono ukuba ngaphandle. Ngalokho ongakwenza weqa iPaseo del Prado ubone iRetiro Park kanye nendlu yokukhonzela yasebukhosini. Uma usuyazi ukuthi uzokwenzani, maningi amathikithi ongazithenga kusenesikhathi.
IPlaza Mayor iyibhishi elikhulu futhi iyindawo ongeke uyiphuthe ngosuku olulodwa eMadrid. Ingunxande, izungezwe amabhilidi amahle, anovulandi abangaphezu kuka-200, nesifanekiso seNkosi uFelipe III kusukela ngo-1616… nomaphi lapho uyibuka, inobuhle. Kuneminyango eyisishiyagalolunye enamakhothamo, eyake yaba iminyango yenkathi ephakathi kodwa namuhla inezindawo zokudlela lapho ungacabanga khona ngezitaladi eziboshwe zaphakathi nendawo.
Phakathi kwemibhoshongo emibili kukhona i-fresco emangalisayo, i-Casa de la Panadería, nonkulunkulukazi u-Cibeles emshadweni wakhe no-Attis, kanye neminye imininingwane emele umlando wedolobha. Uma ngalesi sikhathi sokuhamba sekusemini, kungcono ukuthi uhlale udle ama-tapas eMercado San Miguel Hhayi-ke, umkhathi lapha ungcono kakhulu. Ngenkathi kunezinye izimakethe enhlokodolobha yaseSpain ezindabeni ze-gastronomic lokhu kubhekwa njengenye yezinto ezihamba phambili.
Ukuqomisana kusukela ngo-1916, kuwukwakhiwa lapho insimbi inqoba khona futhi iqiniso liwukuthi inikeza yonke into kusukela kuzinhlanzi ezintsha kuya kumabhoni kashokoledi amahle. Futhi-ke, i-ham engcono kakhulu. I-Puerta del Sol iyikhilomitha elingu-0 laseSpain futhi kwakungelinye lamasango abaluleke kakhulu eMadrid endala ekhulwini le-XNUMX. Namuhla liyisikwele esiphilayo esinezikhumbuzo nezakhiwo eziningi ezibalulekile.
Isithombe esihle siseduze nejazi lezikhali zedolobha, Ibhere Nesihlahla Sitrobheli, ngaphandle nje komnyango wesitimela esingaphansi. Kusukela lapha ungakwazi wehle eCalle Mayor ubheke emfuleni futhi udlule I-Royal Theatre, iRoyal Palace kanye ne-Almudena Cathedral.
Ngokusobala ngeke ube naso isikhathi sokwazisa ingaphakathi layo elihle kodwa qiniseka ukuthi ngaphandle nawo ayamangalisa. Ngenhlonipho ku U-Gran Vía Igxilisa kakhulu imikhiqizo ethandwa kakhulu, kodwa uma ufuna enye indawo yezitolo ungabhekisa amabombo ezindaweni zaseChueca naseMalasaña, ezinemigwaqo yazo emincane nezitolo zazo ezincane.
Ngemva kokwenza lolu hambo, iqiniso liwukuthi uzochitha ingxenye enkulu yosuku, ubala isikhathi sasekuseni nesasemini futhi kungani ungaphuzi ikhofi phakathi nemini futhi uphumule imilenze yakho. Cishe u-7 noma u-8 kufanele futhi uyeke ukujabulele ukushona kwelanga. Ukubuka kwepanoramic kweGran Vía kanye nebhilidi leMetropole ukusuka ku-Head bar kuyamangaza futhi kuzoba okuhle kakhulu kokuvalelisa kweMadrid.
Ikhanda lisophahleni lwe-Círculo de Bellas Artes, izitezi eziyisikhombisa ukuphakama, indawo yokucima ukoma nerestshurenti cishe ine 360 ° ukubukwa kwedolobha, noma okungenani isikhungo sayo somlando esithandekayo nesihehayo. Iziphuzo azishibhile nhlobo, kusobala, kodwa ngaphandle kokungabaza Kungcono kakhulu ukuvala amahora angama-24 eMadrid. Ngeke uzisole.
Futhi-ke yebo, ungahlala ukuze udle noma uma kubiza wehlela emgwaqeni futhi uyaphuma uyofuna ama-tapas. Indawo enhle yalokho i-Huertas, ene-Casa Alberto noma i-La Venencia. Okokugcina, unabo ubusuku noma cha? Uma unobusuku obungabujabulela ungaphuma uyodansa, uma ungalandeli ama-bar okujabulisa kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Madrid » Yini ongayibona eMadrid ngosuku olulodwa